यू–१९ एसिया कप : मलेसियाले नेपाललाई दियो ४६ रनको लक्ष्य, सन्दीपको उत्कृष्ट बलिङ
कात्तिक २८, २०७४| प्रकाशित १८:४९
काठमाडौं– एसिसी यू–१९ एसिया कप अन्तर्गत मलेसियाले नेपाललाई ४६ रनको लक्ष्य दिएको छ। मलेसियाको बायुमास ओभलमा वर्षाले प्रभावित खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको घरेलु टिम ‌१५.३ ओभरमा ४५ रनमा अलआउट भयो।
मलेसियाको इनिङ ध्वस्त पार्न नेपालका सन्दीप लामिछानेले ५ विकेट लिए। साहब अलाम र कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले २–२ विकेट हात पारे। अनिलकुमार साहले १ विकेट लिए।
नेपालले टस जितेर मलेसियालाई पहिले ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। खेल वर्षाले प्रभावित भएपछि २४ ओभरमा घटाइएको थियो।
सुरुवfती पाँच ओभरमा मलेसियाले राम्रो ब्याटिङ गरे पनि नेपालले छैटौं ओभरमा पहिलो सफलता हात पार्‍यो। अनिलकुमार साहले छैटौं ओभरमा मलेसियाका कप्तान विरनदीप जगजित सिंहलाई १० रनमा आउट गरेर नेपाललाई पहिलो सफलता दिलाएका थिए।
सातौं ओभरमा कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरीले २ विकेट लिए। उनले २० रन बनाए खेलिरहेका सइद मुबारकालाई किशोर महतोबाट क्याच गराए भने सौभिन्दर सिंहलाई शून्य रनमा आउट गरे। आठौं ओभरमा सन्दीप लामिछानेले मोहम्मद हफिजलाई एलबिडब्लुको धरापमा पारे। त्यसपछि साहब अलामले लगातार २ विकेट लिएका थिए भने एक विकेट सन्दीपले हात पारे।
मलेसियाका लागि ओपनरद्वय सइदले २० तथा विरनदिपले १० रन जोड्नुबाहेक अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अंकमा रन बटुल्न सकेनन्।
समूह 'ए' कै अर्को खेलमा भारत र बंगलादेशबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। यो खेल पनि वर्षाले प्रभावित भएपछि ढिलोगरी सुरु भएको थियो। दुई खेलबाट सेमिफाइनलमा पुग्ने २ टिमको टुंगो लाग्नेछ।
समूहका दुई चरणका खेलअघि अंक तालिकाको शीर्ष स्थानको बंगलादेशले दुई खेलमा जित निकाल्दै ४ अंक जोडेको छ। नेपाल र भारतले समान १–१ खेलमा जित र हार ब्यहोरेका छन्। दुवै टिमको २–२ अंक छ।
टी–२० विश्वकप छनोट : पहिलो चरणमा नेपाललाई सहज
क्रिकेटर करण केसी र हरि चौहानलाई नेपाली क्रिकेट समर्थक समाजको सम्मान
एसिया कप : रहिमको सानदार ब्याटिङमा बंगलादेशले श्रीलंकालाई हरायो
सात पटकको च्याम्पियन भारतलाई हराउँदै माल्दिभ्सले जित्यो साफ सुजुकी कप
जसले सचिनविरुद्ध एक बल बलिङ गरे र विकेट पनि लिए
यु–१९ एकदिवसीय सिरिजमा नेपालले अफगानिस्तानलाई हरायो
कर अध्ययन कार्यदलले भन्यो - टान र एनएमएले उठाउने पर्यटन शुल्क अनुचित
विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘पर्सनालिटी अफ दी इयर’ अवार्ड
असोज ४ मा निर्माण व्यवसायी महासंघको २०औं साधारण
नदी दोहन गर्नेलाई ३८ लाख जरीवाना
कात्तिक मसान्तभित्र सबै भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ता, जेठ मसान्तमा पूरै
चीनमा के गर्दैछन् प्रचण्ड?
देउवा सरकारको नियुक्तिमा ओली सरकारको सामूहिक अवकाश, सर्वोच्चले फर्काउला कि सदर गर्ला?
३८ सय किलो सुन तस्करी र शाक्य हत्या प्रकरण : उच्च अदालतवाट धमाधम छुट्दै अभियुक्त
कुन बाइक खरीद गर्दा कति प्रतिशत ब्याजमा लाेन?
के चीनले भारतसँगको युद्ध जितेकै हो त?
एलजी सिने सर्कल अवार्ड २०७५ [फाेटाे फिचर]